လောက မှာ ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံး နဲ့ အယုတ်ညံ့ဆုံး လုပ်ရပ် ….. – Let Pan Daily
လောက မှာ ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံး နဲ့ အယုတ်ညံ့ဆုံး လုပ်ရပ် …..
လောကမှာ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး နဲ့ အယုတ်ညံ့ဆုံး လုပ်ရပ်တွေထဲမှာသူ တစ်ပါးအိမ်ထောင်ကိုဖြိုခွဲတာလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်
ဒီလိုလူတွေက ယာယီတော့ ပျော်ရွှင်ရမယ်ဒါပေမယ့်ဘယ်တော့မှ ငြိမ်းချမ်းမှု၊ ပျော်ရွှင်မှုကို ရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး
သူတစ်ပါးမိသားစုကိုဖြိုခွဲတဲ့သူတွေ၊ဖောက်ပြန်တဲ့သူတွေခံစားရမယ့်အရာတွေကို ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်
သူတစ်ပါးအိမ်ထောင်ကိုဖြိုခွဲ တဲ့သူတွေနဲ့ ဖောက်ပြန်တဲ့သူတွေ အမြဲတမ်းခံစားနေရမယ့်အရာကတော့ပူလောင်ခြင်းပါပဲသူတို့ရင်ထဲမှာ နောင်တရသလိုလို၊ ကျေနပ်သလိုလိုမှားနေသလိုလို၊ မှန်နေပြန်သလိုလို မသေချာမရေရာတဲ့ခံစားချက်တွေ အမျိုးမျိုးဖြစ်နေပြီး ဘယ်တော့မှအေးချမ်းရမှာမဟုတ်ပါဘူး တစ်ခါတလေအလိုလိုနေရင်း ဒေါသတွေထွက် ရှူးရှူးရှားရှားတွေဖြစ်ပြီးဘာတွေကိုဒေါသထွက်လို့ထွက်မှန်းမသိအောင်ကို ပူလောင်ပြီး အရူးတစ်ယောက်လို ဖြစ်နေမှာပါ။
ဒီလိုလူမျိုးတွေရဲ့ပတ်သက်မှုဟာ မတရားသဖြင့်ရရှိထားတဲ့ ပတ်သက် မှု မျိုးဖြစ်တာကြောင့် အမြဲတမ်းပူပင်သောကရောက်နေရမှာပါဒါ့အပြင်ဘယ်တော့ဝဋ်ပြန်လည်မလဲ၊ဘယ်တော့များတခြားသူနောက်ပြန်ပါသွားမလဲ၊ကိုယ့်ကိုယ်ဘယ်တော့ထားသွားမလဲဆိုပြီး တစ်ချိန်လုံး စိုးရိမ်သောကရောက်နေရမှာ ပါဒါ့အပြင် ကြာလာတဲ့အခါသူတို့ကြားမှာ နည်းနည်းလေး ပြဿနာ ရှိလာတာနဲ့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်အပြစ်တင်ပြီး စိတ်ညစ်ပြီးရင်းညစ်လာရမှာပါ။
ဝဋ်ဆိုတာက တကယ်ကိုလည်ပါတယ်ခုခေတ်မှာ ဝဋ်လည် တာပိုတောင်မြန်ပါသေးတယ်ဒါကြောင့် ဒီလိုလူတွေဟာ သူတစ်ပါးကို မျက်ရည်ကျအောင်၊ရင်ကွဲအောင်၊နာကျင်အောင်လုပ်ခဲ့သမျှသူတို့ပြန်ခံစားရမှာပါသူတစ်ပါးမျက်ရည်နဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့သူတို့တွေရဲ့ ပတ်သက်မှုဟာ ဘယ်တော့မှ ပျော်စရာကောင်းလာမှာ မဟုတ်သလိုတစ်ချိန်မှာ ကျိန်းသေပေါက်ဝဋ်ပြန်လည်လာတဲ့အခါကျရင် သူတို့ကို ကူညီမယ့်သူ၊ သနားမယ့်သူ တစ်ယောက်မှတောင်ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
သူတစ်ပါးအိမ်ထောင်ကိုဖြိုခွဲတဲ့သူ၊ ဖောက်ပြန်တဲ့သူတွေဟာ ဘယ်လောက် ပဲ စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေရှိရှိ၊ ဘယ်လောက်ပဲပညာအရည်အချင်းမြင့်မြင့် ဘယ်သူကမှသူတို့ကို လေးစားတော့မှမဟုတ်သလိုဘယ်သူကမှလည်း သူတို့ကိုယုံကြည်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့ စည်းစိမ်ဥစ္စာ၊ နာမည်၊ ဂုဏ်ကြောင့်သာ အပေါ်ယံပေါင်းချင်ပေါင်းမယ်၊ ဒါပေမယ့် စိတ်ထဲ မှာတော့သူတို့ကို အထင်အမြင်အရမ်းသေးနေမှာဖြစ်ပါတယ် ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်တွေမှာတောင် ကူညီမယ့်သူတစ်ယောက်မှ ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
သူတစ်ပါးရဲ့အိမ်ထောင်ကိုဖြိုခွဲတဲ့သူတွေ နဲ့ ဖောက်ပြန်တဲ့ သူတွေဟာ နောင်တတရားနဲ့ အဆုံးသတ်ရလေ့ ရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့ သားသမီးတွေရဲ့ နာကျည်းခြင်းကိုခံရတဲ့အခါအရာအားလုံးကို နောင်တရပြီး စစ်မှန်တဲ့ မေတ္တာတရားကို တောင့်တလာတဲ့အခါမှာ ဘယ်သူမှ သူတို့အနားမှာရှိတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး အရင်အချိန်တွေ၊ အရင်တုန်းကဖြူစင်ခဲ့တဲ့ အတိတ်တွေကိုဘယ်လောက်ပဲပြန် လိုချင်လိုချင် သူတို့ကိုယ်တိုင်ကအမဲစက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဘယ်တော့မှပြန်ပြီး မဖြူစင်နိုင်တော့ပါဘူး ။
Credit. To. TrueMan
ဖူးစာရှင် နှင့် တွေ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိနိုင်သည့် အချက်များ….